Insulated Glass Manufacturers and Suppliers - Wholesale Insulated Glass Suppliers
Silk Screen Printing Insulated Girazi
YB Silk Screen Printing Insulated Glass (inowanzo kunzi IGU kana IG) inoumbwa ne2 kana kupfuura zvimedu zvegirazi, zvakaparadzaniswa nedesiccant yakazadzwa spacer bar uye inovharirwa hermitically kumativi kuti iite imwechete unit. YB Silk Screen Printing Insulated Glass iri kushandisa girazi rakakwidziridzwa rakanyungudutswa rakadzikama Low-E, rinodzivirira kudhumhana, risingaputse nekuoma kwegirazi remhepo. Iyo hermetically yakavharwa mweya (Argon, Krypton is Optional) nzvimbo inogadzira chipingamupinyi chekupisa uye kutamisa ruzha zvichiita kuti maIGU ashande zvakanyanya mukudzikisa kupisa kwemhepo-kumhepo kuwana kana kurasikirwa. Kana yakasanganiswa neLow-E kana inofungidzira coating, iyo insulating performance yeIGUs inovandudzwa zvakanyanya.
YB Vacuum Girazi sechizvarwa chitsva chegirazi rinoshanda nesimba, vacuum girazi ine kupisa kutamisa kuita mabhenefiti, girazi rinotora mukana weiyo yakaderera yekupisa conductivity yemhepo. Panyaya yekupisa kwekushisa, iyo thermal conductivity yemhepo kana argon yakazadzwa ine diki yekupisa conductivity. Nekuda kwekukwirira kwekupisa kwekupisa, anti-condensation uye chando kuita kuri nani. Girazi revacuum rinoshandiswa kune zvivakwa, madziro eketeni, magonhi nemahwindo, nezvimwewo. Yedu yepamusoro-yemhando yevacuum girazi inogona kuve yakati sandara kana yakakombama sekuda. Chero saizi, ruvara kana pateni dhizaini zvakare inogona kugadzirwa.
Silk Screen Printing Cake Showcase Girazi Door
YB Silk Screen Printing Cake Showcase Girazi Door iri kushandisa girazi rakakwidziridzwa rakadzikama Low-E, rinodzivirira kudhumhana, rinoputika-risingaputika nekuoma kwegirazi remhepo. Kazhinji gonhi regirazi rinopenya kaviri iro rakazadza neArgon, Krypton inosarudzika. Triple glazing ndeye nani UV kuramba. YB Silk Screen Printing Cake Showcase Girazi Door inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva 0 ℃-22 ℃. Recessed, Add-on, Yakazara refu kana customized mubato anogona zvakare aesthetic poindi.
Kaviri Glazing Wine Cabinet Glass Door
YB Double Glazing Wine Cabinet Glass Door iri kushandisa girazi rakakwidziridzwa rakakwidibira Low-E, rinodzivirira kudhumhana, risingaputike nekuoma kwegirazi remhepo. Kazhinji gonhi regirazi rinopenya kaviri iro rakazadza neArgon, Krypton inosarudzika. Triple glazing ndeye nani UV kuramba. YB Double Glazing Wine Cabinet Glass Door inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva pa5 ℃-22 ℃, iyo gasket ine yakasimba magineti inogona kudzivirira kutonhora kwemhepo kuvuza uye kuwedzera simba-kushanda. Frame inogona kuva PVC, aruminiyamu alloy, simbi isina tsvina ine chero ruvara rwaunoda kusangana nemusika wako wekuda kana kuravira. Recessed, Add-on, Yakazara refu kana customized mubato anogona zvakare aesthetic poindi.